Kuzvipira Kwatinoita ku NCS Sheffield - Element Society
anotenda kune vechidiki vachiwana zvisingaiti
Mepu yeSheffield Youth Charities
Kuzvipira Kwedu kune NCS
Tsigira Basa Redu
Kuzvipira Kwatinoita ku NCS Sheffield
KUTENDA KUNE NCS SHEFFIELD
Icho chinangwa chedu kuronga purogiramu yakasanganiswa nevevanhu iyo yose yakachengeteka uye inowanikwa kune vose vaduku.
Tinoedza zvatinokwanisa kuti tigone kugara nevaduku vane zvido zvakasiyana siyana uye izvi zvinoitwa pamhosva nemhosva. Apo vechidiki kana vabereki vakaratidza zvirwere zvekurapa / rubatsiro pane zvavanoshandisa, tichakurukura kukurukura kuti tiwane mamwe mashoko uye tishande pamwe chete nemapoka ose anobatanidzwa kuti awane sarudzo yakanakisisa.
Takazvipira kuratidza kuchengetedzwa kwevatori vechikamu, vashandi, vanozvipira pamwe nevashandi pamwe chete panguva yepurogiramu. Tinoshanda nevanobatsirana zvikuru, tinoshandisa vadzidzisi vakadzidziswa uye tinoteerera mitemo yose inobatanidzwa. Isu tinodawo vatori vechikamu kuti vatevere nzira yekushandura yakajeka.
Nechepfenyuro yedu yeCSS inopihwa nekutsigirwa kweboka rehurumende iyo pamwe chete ine ruzivo rwakakosha yekushanda nevaduku. Tinoshanda nekutsigirwa kwemakanzuru emunharaunda uye zvikoro.
Muzviitiko zvose, vechidiki vanofambidzana nevadzidzisi vezvidzidzo kana vadzidzisi, uye vashandi vashoma kusvika kuhutano hwevanhu vachave 1: 7. Zvose zvekunze kunze kwekuita basa iri inotungamirirwa nevadzidzisi vakakwana. Boka rega roga rinotungamirirwa nemudzidzisi asingagumi wehuwandu hwepurogiramu. Vashandi vose vakanyatsosarudzwa, vetted uye vakadzidziswa mumabasa ose avanoendesa. Munhu wose anoshandiswa neElement anodiwa kuti ave DBS akaongororwa (yaimbozivikanwa seCRB).
Kuteerera nemitemo yose inobatsira
Tinoteerera zvizere nemitemo yose inobatsira uye, kana zvakakodzera, basa redu rekunze kunze rakabvumirwa pasi peMitemo yeAppercise Licensing Regulations 2004. Isu (kana vatinoshamwaridzana navo) tinopa tsanangudzo yakawanda yehuwandu hwezvinhu zvose. Vashandi vose vakadzidziswa kuziva, kuziva nekudzikisa chero njodzi dzinokonzerwa panguva ino.
NCS yose inosangana nezvakaoma uye kuzvikurira iwe pachako. Tinotarisira kuzvipira, kuzvipira uye kushingaira. Vaparidzi vane basa rekutevera mazano edu ekutevedza panguva yepurogiramu. Kana munhu akabatana achiita zvakanyanya kana kupfuurira kuputsa purogiramu iyi yekufambisa, saka tinofanira kuvakumbira kuti vabve purogiramu. Munyaya iyi, wechidiki uyu aifanira kudzokera kumba.
Code Participant Code of Conduct
1. Tevera mitemo yekuchengeteka uye mutemo
2. Ingosiya nzvimbo yacho neMentor
3. Kwete kupinda mune dzimwe dzimba dzevanhu kana mafiriti
4. Iva muimba yako mushure me10.45pm
5. Kwete doro, zvinodhaka zvisina kutenderwa kana penknives
6. Kuremekedza uye kuisa vamwe vanhu
Kushandira pamwe nekurwisana neKeife Uchiremera OPEN INVITE
NCS Dhigirii Mikana - Verenga izvi kuti zvibatanidzwe!
NCS Sheffield 2018 Kudzidza Chikamu
© 2019 Kodzero dzose dzakachengetedzwa.